शिर्ष CLEVER लोकतन्त्र JHIRIP – तर्क शास्त्र
शिर्ष CLEVER लोकतन्त्र JHIRIP
May 29, 2013 July 28, 2015 Deep Jyoti Leaveacomment
आज जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । देशमा लोकतन्त्र/गणतन्त्र प्राप्तिको झन्डै ७ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि अझै यसलाई संस्थागत गर्न नसक्नु हाम्रो विडम्बना हो । तात्कालीन राजा र उनको निरङ्कुश सरकार विरुद्दको त्यत्रो जनआन्दोलनपछि सुख, शान्ति, अमन चयनको सास फेर्नु पर्ने हामी नागरिक अझै पनि ‘अपराधीले मेरो प्रतिनिधित्व गर्न पाउदैन’, ‘शिर्ष clever लोकतन्त्र jhirip’, ‘I reject Bichauliyas as politicians’ भन्दै प्लेकार्ड बोकेर दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको मिति छिटोभन्दा छिटो तोक्न अनि खिलराज रेग्मी सरकारलाई खबरदारी गर्न देशको सबैभन्दा मर्यादित संस्था भनिएको संविधानसभाको भवन अगाडि लोकतन्त्र दिवसका दिन नारा लाउनु परेको छ ।
नागरिकहरुकै यत्रो सहभागिताले वहाली गरेको गणतन्त्र दिवस मनाउनुलाई पनि नेपालीहरु दुई भागमा बाँडीनु परेको छ । एउटा सरकार पक्षको र अर्को नागरिक समाजको पक्षमा । यसले नै सङ्केत गरिरहेको छ आखिर लोकतन्त्र कसका लागि र केका लागि भनेर । कहिलेकाही त लाग्छ कतै संविधानसभाले गिज्याईरहेछ नारायणहिटीबाट प्रजातन्त्रको अर्थ बानेश्वर सारेकोमा ।
पहिलो संविधानसभामा आफ्नो मत दिएर नयाँ नेपालको नयाँ संविधानको सपना बुनिरहेका हामीलाई राजाले जस्तै जनताको छोराहरुले पनि झुक्याएको छ । झन् शिर्ष नेता र दलहरुमा power sharing भएपछि त को भन्दा को कम जसरी नागरिकको विश्वासमाथि खेल्न थालेका छन् । चुनाव लगत्तै अब त हामीलाई यो संक्रमणकालको बहानाबाट बाहिर निकाल्ला भनेको त के थाहा थियो र झन् यसमा घिउ थप्ने काम गर्दैछन् हाम्रा नेताज्यूहरुले भनेर । घरिघरि सम्झदा दिक्क लाग्छ, अहिले नै देश छोडेर जाउँ जस्तो लाग्छ तर फेरि सोचेर ल्याउँदा होइन हामी नै गयौं भने त झन् यिनीहरुको निगरानी कसले गर्छ, खबरदारी कसले गर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तै कुरा सोंच्दासोंच्दै फेरि माया लाग्छ त्यही प्रजातन्त्रको, त्यही लोकतन्त्रको अनि त्यही गणतन्त्रको जसमा कति निर्दोष नागरिकहरुले आफूलाई आहुति दिएका छन् देशको लागि भनेर । अनि फेरि एउटा झिनो आश देख्न थाल्छु म वयश्क लोकतन्त्र/गणतन्त्रको जसमा म लोकतन्त्र/गणतन्त्रको आनन्द लिइरहेको हुनेछु अनि फेरि रमाउन थाल्छु कलिलो लोकतन्त्र/गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिरहेको संघर्षसँगै ।
एकजना वौद्धिक व्यक्तित्वले भन्दै थिए लोकतन्त्रमा फरक मतहरु हुन्छन्, फरक विचारहरु, फरक व्यक्तिहरु हुन्छन् । आत्तिनु हुँदैन झन् हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै खबरदारीमा हुन्छ तर कहिलेकाही म एक्लै हुँदा सोच्ने गर्छु आखिर खबरदारी त्यो पनि संविधानमै त कहिलेसम्म ? यसको पनि त time frame होला नि ? कतै हाम्रो पुस्ता संविधान मात्र भन्दा भन्दै विलिन हुने त होइन ? हुन त हामी आशावादी छौँ हामीले हाम्रो कालमै नयाँ संविधानसहितको नयाँ नेपाल हेर्न पाउनेछौँ र हामीमा लागेको संक्रमणकालीन पुस्ताको tag हटाउनेछौँ । त्यसैले त हामी अराजक नभईकन तपाईंहरुलाई खबरदारी गर्दैछौँ नि !
Viewsगणतन्त्र दिवस, नेपाल, featured, Ganatantra Diwas, Youth
← हाईवेसँगको मेरो नाता
मेरो मत अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई जिताउन सहयोगी बन्दैन →